Tourisme - ewa.mg
Sary tahiry : Andraikiba – Antsirabe tamin’ny taona 1950
Ito manaraka ito dia misy sary mampiseho an'i Andraikiba any Antsirabe tamin'ny taona 1950. Sary nalaina avy amin'ny pejy Facebook-ny "Ny taniko"
Sary tahiry : Mahamasina 1940
Sary tahiry : Analakely 1900
Grevin’ny “gilet jaune”: nihena ny mpizahatany nentin’i Costa Rica teto Toamasina
Ny fanaovana Asatanana mazàna dia heverina eny anivon’ny fiarahamonina eny, ho natokana ho an’ireo izay tsy tafita tamin’ny fianarana, izany hoe ho an’ny olona efa tsy mahita atao intsony na farahidiny amin’ny fahalalana. Misy ihany koa ireo izay mihevitra fa ny Asatanana dia natao ho an’ireo izay manana talenta manokana eo amin’ny fahaiza-manaony. Raha tombanana anefa dia mahatratra roa tapitrisa ny malagasy mpanao Asatanana matihanina na manao vadin’asa ny Asatanana. Izany hoe olona manodidina ny folo tapitrisa no mivelona mivantana na ankolaka amin’ny Asatanana : ary dia saiky ny antsasaky ny mponina rehetra eto Madagasikara izany. Eo amin’ny lafiny ara-toekarena arak’izany dia mamaritra ny 8 hatramin’ny 12 isanjaton’ny harikarem-pirenena ny seham-pamokarana Asatanana. Mety hodihin-tsy hita tokoa angamba fa miaina ao anaty tontolon’ny Asatanana isika amin’ny andavan'androm-piainantsika satria dia saiky vokatry ny Asatanana avokoa ireo manodidina antsika rehetra ireo. Tsy vitsy no mihevitra fa ny Asatanana dia manodidina ny famokarana haingo trano sy fitaovana ilaina amin’ny fiainana andavanandro fotsiny ihany, amin’ny alalan’ireo akora misy eto amintsika: zaitra, sikotra, rafitra hazo sy vato, rary, lamba tenomina tanana sy ny sisa. Tsy ireo ihany anefa no voafaritra ao anatin’ny lalam-pihariana Asatanana fa tafiditra ao ihany koa ny mpanamboatra fiara, ny mpikarakara ny kojakoja momba ny fatson-drano sy ny tambazotra fidiovana na ny plombier, ireo mpanamboatra sy mpivarotra hanimasaka, ny mpanao trano, sy ny sisa maro hafa… Ambaran’ny lalàna fa ahitana lalam-pihariana miisa roa ambinifolo ny seham-pihariana Asatanana ka saiky mahakasika ny fiainantsika andavanandro avokoa izany. Ny lalàna faha 95.004 tamin’ny 21 Jona 1995, izay navaozina sy nofenoina tamin’ny lalana faha 97.018 ny 14 aogositra 1997 no mamaritra ny fanaovana Asatanana, izay tsy mikendry afa-tsy ny fampivoarana ny seha-pamokarana momba ny Asatanana eto Madagasikara. Mpandraharaha ara-toe-karena ny “Mpanao Asatanana” ary voalaza ao amin’ny andininy voalohany amin’io lalàna io fa ny fanodinana atao tanana ho lasa vokatra ilaina andavanandro, na hanjary zava-kanto no fototr’asan’ny Mpanao Asatanana. Miavaka amin’ny mpanao taozava-baventy izy noho izany satria tsy mila vola betsaka eo amin’ny fananganana sy fampandehanana ny orinasa, ary tsy mampiasa mpiasa maro, na milina mandeha ho azy eo amin’ny fomba famokarana. Miasa sy misahana ny asa aman-draharahany amin’ny anaran’ny tenany manokana ny Mpanao Asatanana, araka ny andininy faharoa, ary misolotena azy eo anatrehan’ny fitsarana izy noho izany. Hatreto arak’izany dia ny hatsaran’ny asa vita no zava-dehibe kendren’ny lalàna, fa tsy ny hazakazaka ho amin’ny fampitobahana ny vokatra eo anivon’ny tsena. Andraikitra voalohany tokony ho raisin’ny mpanao Asatanana noho izany, ny fidirana amin’ny sehatry ny ara-dalàna; ny fanamarinana ny fahaizany Asatanana amin’ny fanaovana karatra maha-mpanao Asatanana, izay alaina eny amin’ny antenimieran’ny Asatanana na ny Ministera misahana ny Asatanana, arakaraka ny toe-javamisy. Ny antenimieran’ny Asatanana dia fikambanan’ ny mpanao Asatanana miasa amin’ny toerana iray voafaritra ka mikatsaka ny tombotsoa iraisana ho an’io fikambanana mpanao Asatanana io. Ao no hametrahan’ny mpanao Asatanana ny taratasy fangatahana ny fankatoavana ny Asatanana ataony. Misy vaomiera misahana sy mandinika izany, mialoha ny fanomezana ny taratasy manamarina ny maha-mpanao Asatanana, izay ampiarahina amin’ny tapakila misy ny laharan’ny registrin’ny ny asa ary famantarana avy any amin’ny Ministera misahana ny Asatanana. Fandraisana andraikitra faharoa, tokony hataon’ny mpanao Asatanana dia ny fanamafisana ny fahaiza-manao, izay tena ilaina tokoa noho ny fihazakazahan’ny fandrosoana ka mila matihanina amin’ny zavatra hay mba ahafahana mifaninana amin’ny hafa. Izany indrindra no hanentanana ny mpanao Asatanana hiditra anaty fikambanana mba ahazoana tombontsoa samihafa toy ny fampianarana isan-karazany. Ny antenimieran’ny Asatanana ohatra dia afaka miara-miasa amina ivo-pampianarana hampianatra ny mpikambana ao aminy, manome sara-piofanana (na bourse), ary manakarama mpampianatra matihanina hampianatra ny mpanao asa tànana. Andraikitra tokony ho raisin’ny mpanao Asatanana ihany koa ny fiarovana ny asany. Voasoratra ao amin’ny lalàna mantsy fa tokony ho hita taratra ao amin’ny Asatanana ny finiavana sy ny fahaiza-mamorona. Hitantsika amin’izao vaninandro izao anefa fa betsaka ireo mpisandoka ka mandika ny asa nifoforan’ny sasany fotsiny.
Haranty ao amin’ny masoivohon’ny banky BFV-SG ao amin’ny araben’ny Fahaleovantena ny zava-bitan’ny vondrona mpanakanto, ny Gasy Rug, nanomboka ny 22 novambra teo hatramin’ny 30 novambra ho avy izao. Mampiavaka azy ireo ny fikirakirana ny rary avy amin’ny taretra, toy ny fanaovana tsihy na karipetra lehibe vita amin’ny tanana. Mampiasa akora fototra avy eto an-toerana ny Gasy Rug, ary namolavola ny endriny ny mpanakanto Pascale Vetois. Miara-miombon’antoka amin’ny Alliance française Toamasina ny BFV-SG amin’ny fanohanana ny Gasy Rug izao, tafiditra ao anatin’ny asa sosialy miteraka asa. Taozavatra efa natao tao amin’ny rovan’i Manjakamiadana, fony taonjato faha-20. Mifanojo amin’ny faha-20 taona nisian’ny banky BFV-SG eto Madagasikara ihany koa izao tranga izao. Fotoana manamarika ny fahavononany hanatsara hatrany ny tolotra sy ny fanomezana fahafaham-po ny mpanjifa. Azo adika fa tafiditra ao anatin’ny fitaratry sady mampifandray ny Malagasy ity banky ity, ankehitriny. Tanjony rahateo ny fandraisana anjara mametraka ny fampandrosoana maharitra ny toekarena, ahafahan’ny tsirairay manatanteraka ny tetikasany avy. Njaka A.L’article BFV-SG: manohana ny asa tanana a été récupéré chez Newsmada.
News - Tourisme - Ao Raha
VAROTRA FAMPIRANTIANA :: Mandeha ny tsenan’ny vakoka malagasy any ivelany
Manintona ireo vahiny any ivelany ny taozavatra vita Malagasy. Efa ho telo volana mahery teo ho eo izao no nanomboka ilay varotra fampirantiana na ny “ Madagascar art de la Grande île” mikasika ny kolontsaina sy ny vakoka eto Madagasikra izay atao ao amin’ny mozea an’ny Quai Branly ao an-drenivohitr’i Frantsa (Paris). Araka ny fanazavan’ny mpikarakara dia tsy mitsaha-mitombo ireo olona tonga mijery ny vokatra eny an-toerana ary tsy mandalo fotsiny ihany ny akamaroan’izy ireo fa sady mividy no manafatra ireo sanganasa miranty eny an-toerana ihany koa. Mari­hina fa na any ampitan-dranomasina aza ny hetsika no hatao dia tsy ho diso anjara amin’izany ny avy eto an-toerana satria hisy ny fandefasana izany mivantana na ilay atao hoe “visite virtuelle” izay hotanterahina etsy amin’ny IFM Analakely, ny 17 sy ny 19 desambra ho avy izao. Marihina ihany koa fa sambany indray teo amin’ny tantaran’i Madagasikara no mandray anjara amin’ny fampirantiana tahaka izao. Tanjona amin’ity hetsika fampirantiana ity ny hamerina indray ny hasina sy ny lanjan’ ny kolontsaina sy ny asa tanana vita Malagasy. Tsara ny mampahatsiahy fa hitohy hatra­min’ny voalohan’ny taona 2019 ity fampirantiana ity L’article VAROTRA FAMPIRANTIANA :: Mandeha ny tsenan’ny vakoka malagasy any ivelany est apparu en premier sur AoRaha.
Fizahantany: miantso ny Sinoa ny eto Mada gasikara
Miantso ny Sinoa mpizahatany ny minisitry ny Fizahantany eto amintsika, Razafintsiandraofa Jean Brunelle, hitsidika an’i Madagasikara. Vitsy loatra ny mpizahatany vahiny tonga eto an-terana, 250 000 isan-taona monja, noho ny antony maro samihafa. Rehefa nifampiresaka tamin-dry zareo Sinoa ny minisitra, vonona ry zareo ho avy aty Madagasikara, hampitombo izany isa izany avo roa heny ary hampitomboina isan-taona. Fepetra takin-dry zareo Sinoa ny mba tsy hanaovana antsojay azy ireo rehefa tonga aty Madagasikara. “Matetika, avadika zavatra hafa ny fahitana Sinoa tonga any aminareo na tsy ampitoviana amin’ny mpizahatany vahiny hafa”, raha ny feo avy any Sina. Maro anisa izao ny Sinoa tonga aty Afrika, ny 12 % amin’ireo mpizahatany sinoa izao ny misafidy an’i Afrika, nampidi-bola 215 miliara dolara be izao, manantombo 40 % amin’ny ataon’ny Eoropeanina. Tsy mahita anjara amin’izany ny eto Madagasikara nefa manana ny mahaliana. Ankoatra ireo tany arabo, mahasarika azy ireo izao ny any Cote d’Ivoire, ny any Kenya. Tsy latsa-danja ny misy any amin’ireo firenena ireo anefa ny hita eto amintsika. R.Mathieu